Archives des Bokim-panabeazana - Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Catégorie : Bokim-panabeazana
Raiso ka vakio ny gazety Hafatro
Gazetim-panabeazana ho an’ireo Iraka sy Vavolombelona ny Hafatro. Efa naparitaka ny laharana faha-797, ireto avy ireo lahatsoratra ho hitanao ao : Vavaka Fanolorana ny andro 2016 Famaranana ny Taon-jobily AFAFI-FET Hafatry ny Papa Fransoa...
Efa nahazo gazety Firaisankina ve ianao ?
Azo vidiana any amin’ny Foibe Nasionaly ny gazety Firaisankina laharana 214. Santionany amin’ireo lahatsoratra ho hitanao ao ireto : Hafatry ny Papa momba ny taonan’ny Famindrampo Famaranana ny Jôbily faha 100 taona FET tany...
Bokim-panabeazana atolotra ny Vavolombelon’i Kristy ny Fanasina. « Ho Vavolombelon’i Kristy, ho Fanasin’ny tany, ho Fahazavan’izao tontolo izao…tsy ampy intsony ny mahay katesizy na ny mahalala an’i Kristy fa ny fiainan’i Kristy mihitsy no ampianarina...
Boky hanoro làlana ny mpiandraikitra eo amin’ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora kristianina mivondrona ao amin’ny Eokaristia ny Torolàlana. Mamaly ny fanirian’ireo mpiandraikitra mikatsaka ny fomba hitantanana ny fikambanana mba hahafahana mamaly ny...